सरकारी कोषको रू. १ खर्ब अलपत्र | गृहपृष्ठ
Home समाचार सरकारी कोषको रू. १ खर्ब अलपत्र
on: १७ असार २०७५, आईतवार १०:११ समाचार
सरकारी कोषको रू. १ खर्ब अलपत्र
काठमाडौं (अस) । नेपाल सरकारका विभिन्न कोषमा रहेको करीब रू. १ खर्ब अलपत्र परेको छ । जुन प्रयोजनका निम्ति कोष स्थापना गरिएको हो, सोही प्रयोजनका निम्ति रकम खर्च हुन नसक्दा सो रकम अलपत्र परेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार सरकारका विभिन्न कोषमा रहेको रू. ९२ अर्ब ८२ करोड ५८ लाख प्रयोगमा आउन सकेको छैन । यो रकम लामो समयदेखि कोषमा रहे पनि उपयोगमा आउन नसकेको सो कार्यालयले जारी गरेको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेलगत्तै त्यसरी उपयोगमा आउन नसकेको रकम तत्काल परिचालन गर्ने रणनीति बनाए पनि त्यो प्रयासले सार्थकता भने पाउन सकेन ।
सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आउन नसकेको कोषको रकम हाल रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको कोषमा देखिन्छ । सो मन्त्रालयअन्तर्गतको सैनिक कल्याणकारी कोषमा मात्रै रू. ३९ अर्ब ६१ करोड ५७ लाख रहेको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको कोषमा रहेको ३१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पनि उपयोगमा आउन सकेको छैन । सोही कार्यालयअन्तर्गतको पुनर्निर्माण कोषमा प्रयोगमा आउन नसकेको रकम रू. २८ अर्ब २८ करोड ७० लाख ९७ हजार रहेको छ । त्यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषको रू. १३ अर्ब २२ करोड, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको रू. ४ अर्ब ३ करोड र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको रू. २ अर्ब १७ करोड पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।
सरकारले कोष परिचालनका निम्ति कार्यविधि बनाउन नसक्दा उद्देश्यअनुरूपका दर्जनौं कोषका रकम प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । पुनर्निर्माण कोष, वातावरण संरक्षण कोष स्थापना भएको वर्षौं भए पनि कार्यविधि भने अझै बन्न सकेको छैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले प्राधिकरणलाई आवश्यक परेको रकम अर्थबाटै निकासा भइरहेकाले कोष प्रयोगमा नआएको अभियानलाई जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पुनर्निर्माण कोषलाई सरकारले खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले नै कोष आवश्यक नदेखेपछि त्यसको औचित्य समाप्त भएको भन्दै अर्थले सो कोष खारेज गर्ने अन्तिम तयारी गरेको हो । प्रयोगमा नआएका अन्य कोषको सन्दर्भमा ठोस योजना बनाएर आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रयोगमा ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारी कोषहरूमा रहेको रकम लामो समयदेखि प्रयोगमा आउन नसकेकोप्रति सरकार सचेत छ । उनका अनुसार यसबारे सरकारले ठोस योजना बनाई रकमलाई सही रूपमा परिचालन गर्ने तयारी थालेको छ ।